नेपाल​ आर्मीले प​हिलो प​ट​क फिल्म​ खेल्न​ अडिश​न​ दिँदै (भिडियो)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
नेपाल​ आर्मीले प​हिलो प​ट​क फिल्म​ खेल्न​ अडिश​न​ दिँदै (भिडियो)
फिल्मी फ​न्डा। नेपाली फिल्म​को लागी कलाकार​ह​रुले अडिश​न​ दिएको स​माचार​ हामीले लेखिर​हेका छौ, प​दिर​हेका छौ। अब​ भ​ने फिल्म​ खेल्न​को लागी नेपाल​ आर्मीले स​मेत​ अडिश​न​ दिएको ख​ब​र​ बाहिरिएको छ​। नेपाल​को ईतिहास​सँग​ स​म्ब​न्धित फिल्म​ नालापानि को लागि नेपाल​ आर्मीले अडिश​न​ दिएको ख​ब​र​ ब​हिरिएको हो।
नालापानिको बिषयमा आधारित रहेर नेपाली चलचित्र ‘नालापानी’ बन्न लागिरहेको छ । प्रोफेसर रामराजा कुँवर र डा.धन बहादुर कुँवरले लेखेको ऐतिहासिक पुस्तक ‘वीर बलभद्र कुँवर’मा आधारित रहि चलचित्र बन्नेछ । रिमेश अधिकारीले निर्देशन गर्ने यो चलचित्रको लागि कलाकारहरुको अडिसन शुरु भएको छ । अडिसनको शुरुमा नै नेपाल आर्मीको अडिसन भएको छ । चलचित्रमा धेरै दृश्य द्वन्द्वका हुनेछन् जसको कारण पनि दक्ष योद्दा जरुरी छ । योद्दाहरुलाई तयार पार्न समय धेरै लाग्ने भएकोले पनि नेपाल आर्मीका जवानहरुलाई नै अभिनय गराउन लागिएको निर्देशक अधिकारीले बताए ।
चलचित्रमा युद्दका दृश्य देखाउँदा प्राकृतिक हुनु जरुरी रहेकोले पनि आर्मीबाट नै कलाकारहरु छनौट भईरहेका छन् । यद्यपी प्रमूख भूमिकामा भने नेपाल आर्मीका कलाकार हुनेछैनन् ।
यो चलचित्र लाई नेपाली सेनाले पुराना हतियार, तोप, सैनिक कलाकार, सैनिक नियम तथा सैनिक नियमका लागि प्रशिक्षक लगायत सहयोग गरेको छ ।
नेपालको इतिहासमै एउटा गर्व गर्न लायक यो वीरताको गौरवपूर्ण तथ्य समेटेर यो चलचित्र निर्माण हुने निर्माता मनोज शाक्यले बताए । झण्डै ९ करोडको लागतमा निर्माण हुने बताइएको फिल्म ‘नालापानी’मा अर्जनजंग शाही, नवल खड्का, मनोज शाक्य, पुजना प्रधान, ईशान बिजु श्रेष्ठ, विशाल श्रेष्ठ, गीता अधिकारी लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहनेछ ।
सम्राट शाक्य कार्यकारी निर्देशक रहेको फिल्ममा मजोन शाक्य निर्माताको रुपमा रहेका छन् । फिल्मको पटकथा तथा संवाद आशिष रेग्मीले लेखेका हुन् भने रोशन श्रेष्ठ फिल्मका द्वन्द्व निर्देशक हुन् ।
हाल भारतमा अवस्थित देहरादुनको नालापानीमा सन् १८१४ मा नेपालले ब्रिटिश साम्राज्यविरुद्द नेपालले युद्द लडेको थियो । आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै भारतसम्म आइपुगेको तत्कालिन ब्रिटिश इष्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमा आफ्नो अधिपत्य कायम गर्न अघि बढेको समयमा त्यसलाई रोक्न नेपालले युद्द लड्नुपरेको थियो ।
त्यो समयमा नेपालमा पर्ने नालापानी आइपुगेको अंग्रेज सेनासँग नेपाली सेनाको मुठभेड भयो । तत्कालिन वीर गोरखाली सेना कप्तान बलभद्र कुँवरको नेतृत्वमा नेपालले अंग्रेजसँग बहादुरीपूर्वक लडाइँ लडेको थियो ।
कमजोर सैन्य शक्ति, प्रविधि आदिका कारण उक्त लडाइँमा नेपालले विजय प्राप्त गर्न सकेन तर, नेपालले युद्दमा प्रस्तुत गरेको वीरता तत्कालिन शत्रुपक्ष र विश्व सैन्य इतिहासमै र हालसम्म पनि उच्च प्रशंसित भयो । उक्त लडाईँ नेपाली सेनाले तीन पटकसम्म जितेको थियो तर अंग्रेज फौजले चलाखी गरेर हराएको थियो । अंग्रेजले पानीको मुहान थुनिदिएपछि पनि लामो समय लडाईँ गर्दा गर्दै नेपाली सेना पछाडी हट्न बाध्य बनेको थियो ।
अनुराग कश्यप नेपाली फिल्म फेष्टिभलमा सहभागी भएको कति पारिश्रमिक चार्ज गर्छन् ?
कोरोनाका कारण रोकियो ‘आँधी तुफान–२’को सुटिङ
गायक प्रमोद खरेलको आवाजमा ‘प्रेमको चिनो’ (भिडियो)
सकियो ‘प्रकाश’को छायांकन
पुष्पा र सुनिसाको ‘पार्यो माया जालैमा'(भिडियो)
मेलीना र श्रीकृष्णको स्वरमा रहेको “राम हो झुमा हो” (भिडियो)
सुपुष्पा र दिपकको ‘सयौं कारण’ मा रोमान्स (भिडियो)
अभिनेता सुवासले ल्याए ‘कुल्चि हिड्छन् फूललाई’ (भिडियो)
शिव,गौरी र सलोनको ‘रुन्छनि मेरो मन'(भिडियो)
राजनराज र बियोन्सेको ‘ल्यासी पाउ'(भिडियो)